Steel Spool xirxirida caaga Baling Wire - Shiinaha Ningbo Judin Monofilament Gaarka ah
Wire Baling caaga
Steel Spool xirxirida Wire caaga Baling
Xirxirida Spool Wooden Wire Baling caaga
Caaga Spool xirxirida Wire caaga Baling
4 x 4 mm Monofilament caaga Wire
Xoog siligga Sare
Fiican ee RDF ka hareen wakhtigii
Available in bespoke dhererka iyo tirada caadiga ah
RDF, ama Diiddo Shiidaalka Ooraahda, wuxuu isticmaalaa technology ah in ay soo saartaa tamarta laga qashinka waa ku haboonayn in dib u warshadaynta dhaqanka. Garashada baahida loo qabo silig baling in ku haboon yahay RDF a, aan horumariyo wax soo saarka taas oo ku haboon yahay baling qashinka ujeedooyin gubista.
Marka baling iyo xirayaan qashinka adkaha ah, waayo gubista, silig baling steel dhaqanka waa in la saaro ka hor habka gubashadii bilaabmin. Tani waa shaqada degdegga ah iyo kharash badan.
Our cusub JUDIN caaga Wire gaar aasaasay oo soo saaray by Judin la gubo karaa inta lagu guda jiro soo hara bixinta qiimaha calorific ah.
Length per gariiradda: 13000 m
Culayska halkii mitir, 0,018 kg
Aragti of Roll: φ 550 x 270mm
nasasho siligga ka mid ah dhererka: 5000 N
nasasho siligga ee goobada la gunti: 4800 N
Muruqa qeybtii on mid ka mid ah oo dhererkiisu: 15%
Muruqa at fasax la gunti: 9%
Bales lagu shubto karaa in Foornooyinka buuxda ku duudduubtay oo aan faragelin taas oo si weyn u badbaadin doonaa waqti iyo lacag by hagaajinta nidaamka howsha.
Bixisey in 13000 duntu Meter, oo miisaankeedu yahay kg oo kaliya 235, taas oo u dhiganta qiyaastii 750 kg ee xarigga birta. Sidaas daraaddeed markii lagu rakibay u RDF / SRF Baler la looxyada lahaansho feed (waa la heli karaa si aad u dalbato) maaraysay iyo kaydka shaqada qaaday in ay is dhaafsadaan duntu waxaa si weyn u dhimay, taas oo ah faa'iido in ay howl ah.
Reel kasta oo caadi ahaan soo saari doonaa 2800 xidhmooyin (oo ku salaysan tirada Bale of 1.2 1m X 1m X) iyo badbaadin doonaa xaddi weyn oo waqti howl ah. The Judin caaga Wire ayaa dhaawac u dhiganta breaking in siligga hooseeyo silig steel iyo mid deggan / adag in la isticmaalo.
Isticmaalka JUDIN caaga Wire masaxdaa rigoore hadda la qaado by inta badan incinerators Midowga Yurub u soo ceshano silig steel ka foornada, ilaa hadda soo saaro kaydka qiimaha.
Macaamiisha isticmaalaya JUDIN caaga Wire furi doonaa goobaha dheeraad ah / fursado si loo farsameeyo ay wax.
Previous: Xirxirida Spool Wooden Wire Baling caaga
4 * 4 caaga Baling Wire
4x4 Wire Baling
4x4 caaga Baling Wire
Wire Baling Environmental
Guban 10 Boqorradii Wire Baling Square
Guban Lindex caaga Baling Wire
guban Macpress caaga Baling Wire
guban Birta Spool Baling Wire
guban PET Baling Wire
guban PET Square Baling Wire
Guban Presona caaga Baling Wire
Guban Sacria Machines caaga Baling Wire
guban UnoTech caaga Baling Wire
guban Whitham Mills caaga Baling silig
Birta Spool Baling Wire
Recycle caaga Baling Wire
Recycling Wire Baling
Recycling caaga Baling silig
Ningbo Judin Gaarka Monofilament Co., Ltd